Thailand: Mandiso Fanantenana Ny Mpankafy Ny Faharesena Tamin’ny Ady Totohondry Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2012 3:12 GMT
Sirikaew Pimsiri, fantatra any an-toerana amin'ny hoe “Nong Taew,” no nandrandraina hahazo medaly tany amin'ny Lalao Olaimpika. Volafotsy iray azo tamin'ny fifaninanan'ireo vehivavy (58kg) no nentiny nody. Teratany iray avy ao amin'ny faritanin'i Khon Kaen, nitondra rehareha sy laza ho an'ny tany niaviany izy izay niteraka mihitsy resaka mikasika ny hanomezana ny anarany ho an'ny làlana iray ao an-toerana. Tamin'ny fiverenany an-tanindrazana dia notolorana ihany koa ny maripankasitrahana ‘Ny Zanakavavy Tena Mamaly Babena’ izy tamin'ny Andro natokana ho an'ny Reny, avy amin'nireo manampahefan'ny faritra.
Chanatip Sonkham, na “Nong Lek,” dia nahazo alimo tamin'ny taekwondo sokajy vehivavy (49 kg.). Nong Lek no nitarika tamin'ny manasa-dàlana, saingy solafaka an-dàlana tsy tonga tany amin'ny farany sy nitarika ny fahareseny. Na izany aza anefa dia mbola nantsoina ihany hoe “mahery fo” izy ary koa nilatro nanerana ny tanàna nahabe azy, Pattalung, rehefa tafaverina avy any Londona.
Ny nahazo medaly nefa nahatonga resabe indrindra tamin'izy rehetra dia ny tamin'ny ady totohondry ‘poids plume’ sokajy lehilahy, Kaeo Pongprayoon, izay nahazo medaly volafotsy. Ny faharesen'i Kaeo dia zava-nahagaga ho an'ny ankamaroan'ireo Thai mpankafy, izay tsy nino ny filazana fa ilay mpanao boxe Thai no resy tamin'ilay fifanandrinana. Zou, 31 taona, niaro ny anaram-boninahitra azony tany Beijing efatra taona lasa izay, nefa izy no nandresy tamin'ny lalao famaranana tamin'ity taona ity, narahana fanapahan-kevitra nahabe resaka. Na ireo vahoaka be tao amin'ny ExCel Arena tao Londona aza dia nitsipaka ilay vokatra farany raha i Kaeo kosa nitomany teny ambony ringa, araka ny tatitra iray nataon'ny Bangkok Post.
“Fantatro ny anton'ny nitomanian'i Kaeo… Nahita azy iny aho ary mba nitomany koa. Tezitra mafy aho,” hoy Jeb Jai Wah tomponandrikitra ao amin'ny tranonkalan'ny Sanook Sport.
Nitondra ny hafany tety anaty aterineto ireo mpankafy feno hatezerana. Nivoaka tamin'ny teny Anglisy tao amin'ny www.keelamun.com ity saribe ity :